Medical Writings ဆေးပညာစာများ: High Blood Pressure Aftermath သွေးတိုးကျဆေး သတိပေးပါရစေ
“သွေးတိုးကျစေတဲ့ဆေးပေါင်း ၂ဝဝ ရှိတယ်။ ဒီလိုအများကြီးထဲကနေ လူနာအတွက်အသင့်ဆုံးဆိုတာ ရွေးပေးရပါတယ်။” လို့ အမေရိကန် ဆေးပညာပါမောက္ခ ဒေါက်တာ သောမတ်စ်-ဂေးလ်စ် ကပြောပါတယ်။
Diuretics ဆီးသွားစေတဲ့ဆေးကြောင့် Potassium (ပိုတက်ဆီယအ်) နည်းစေရာကနေပြီး နှလုံးခုန်မမှန်တာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ACE inhibitors နဲ့ Angiotensin receptor blockers ဆေးတွေကတော့ အဲလို မဖြစ်စေဘူး။
4. ဆေးကုသမှု စနစ်တကျမရှိရင် Stroke ဦးနှေညက်သွေးကြောပျက်စီးတာ၊ Heart attack နှလုံး (အတက်) ရတာ၊ Heart failure နှလုံးကနိုင်အောင် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တာ နဲ့ Kidney failure ကျောက်ကပ်ပျက်စီးတာတွေ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ သွေးတိုးကို Silent killer တိတ်တိတ်လေး အသက်သေစေအောင်လုပ်တာလို့ ခေါ်ကြတယ်။ ခြောက်ပြောတာ မဟုတ်ပါ။
5. သွေးတိုးနှင့် တခြားဆေးတွေ -
- Hypertension (1) သွေးတိုးရောဂါ (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2008/10/high-blood-pressure.html
- Hypertension (2) သွေးတိုးရောဂါ (၂) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/06/hypertension.html